Fihaonana nikaton-trano: nandray an’i Tobias Glucksman teny Faravohitra Ravalo | NewsMada
Fihaonana nikaton-trano: nandray an’i Tobias Glucksman teny Faravohitra Ravalo
Nihaona nikaton-trano teny Faravohitra ny filoha teo aloha, Ravalomanana Marc sy ny mpanolotsaina voalohany eo anivon’ny masoivoho Amerikanina, i Tobias Glucksamn, omaly. Tsy nisy nipika ny dinika teo amin’ny an-daniny sy an-kilany. Na izany aza, nambaran’ny filoha nasionalin’ny antoko Tim, tamin’ny tambajotran-tseraserany fa nifanakalo hevitra momba ny toe-draharaha politika sy ny sosialy ary ny lafiny toekarena ny roa tonta. Teo koa ny firesahana ny momba ny fiatrehana ny ady atao amin’ny valanaretina covid-19.
Tsiahivina fa nanomboka niasa teto Madagasikara, ny volana aogositra tamin’ny taon-dasa, 2020 ity tompon’andraikitra eo anivon’ny ambasady Amerikanina ity. Efa nisahana ny andraikitry ny fitantanana ny ekipan’ny birao miandraikitra an’i Afrika tany Nigeria ny tenany nialoha ny niasany teto Madagasikara. Teo anelanelan’ny taona 2017 hatramin’ny taona 2019.
Ho tonga hatraiza ny fihaonana ?
Manampahaizana manokana momba ny toekarena ary efa solontena maharitr’i Etazonia teo anivon’ny Firenena mikambana (ONU) tany Nairobi, Kenya ary efa mpanolotsain’ny iraka manokan’ny Amerikanina eo anivon’ny ONU any New York koa i Tobias Glucksamn.
Manampy izany ny naha mpanolotsaina lefitra ara-politika sy toekarena tany Dhaka any Bangladesh.
Araka izany, midika inona ary ho tonga hatraiza izao fihaonana mikaton-trano teo amin’ity olon’ny Amerikanina ity sy ny filoha teo aloha ?